Diyo post :: भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई भेट्न द्वारिका होटलमा कांग्रेस नेताको लर्को ! को–को पुगे ? भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई भेट्न द्वारिका होटलमा कांग्रेस नेताको लर्को ! को–को पुगे ? - Diyo post
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई भेट्न द्वारिका होटलमा कांग्रेस नेताको लर्को ! को–को पुगे ?
काठमाडौैं । नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवासहितका कांग्रेस नेताहरुले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका छन् ।
राजधानीको बाैद्द स्थित एक होटलमा कांग्रेस नेताहरुले मोदीसँग भेट गरेका हुन् । भेटका क्रममा नेपाल भारत सम्बन्ध मजबुद बनाउने विषयमा कुराकानी भएको भारतीय विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ । मोदीलाई भेट्न कांग्रेसका सबै पदाधिकारी हाेटल ह्मायातमा पुगेका थिए ।
कांग्रेस सभापति देउवा, बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति विमलेन्द्र निधी, महामन्त्री पुर्ण बहादुर खड्का, प्रकाशशरण महत, कृष्ण सिटौला, विजय गच्छदार, डा. शशांक कोइराला र शान्तीदेवि यादव उक्त होटलमा पुगेका थिए ।
दुई दिने नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी यतिबेला राजनीतिक भेटघाटमा व्यस्त छन् । शनिबार विहान मुक्तीनाथ पुगेर आएका उनले पशुपतिमा समेत पुजाआजा गरिसकेका छन् ।